आज साँझदेखि शुरू हुने मलमासमा नवविवाहितले के–के गर्न हुँदैन ? - Dainikee News::Fastest news portal nepal, news from nepal
आज साँझदेखि शुरू हुने मलमासमा नवविवाहितले के–के गर्न हुँदैन ?
काठमाडौँ, जेठ १ । जेठ महिनामा अधिकमास परेको छ । जेठ १ गते साँझ ५ बजेर ५३ मिनेटपछि अधिकमास शुरु हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।अधिकमास भन्नाले सामान्यभन्दा बढी भएको महीना बुझिन्छ । मंगलबार साँझ ५ बजेर ५३ मिनेटसम्म औँसी रहेको छ । जेठ १ गते शुक्ल प्रतिपदाको आदिमदेखि अधिकमास शुरु हुने र औँसीको अन्त्यसम्म अर्थात् जेठ ३० गते राति २ बजेसम्म रहने समितिका अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद् प्रा डा रामचन्द्र गौतमले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति: मङ्लबार, जेष्ठ १, २०७५ /Tuesday, May 15th, 2018, 6:03 pm